Jigjigaa: Jiraattoonni nyaataa fi bishaan dhabuu himan - BBC News Afaan Oromoo
Rakkoon nageenyaa magaalaa Jigjigaa keessatti guyyoota muraasa darbaniif umammee ture xiqqoo tasgabbaa'ulleen jiraattoonni beelaaf saaxilamaa jiraachuu BBC'tti himan.
Raayyaan ittisa biyyaafi poolisiin hojii tasgabbeessuu hojachuun alatti deeggarsi mootummaan ummataaf kennaa jiru akka hinjirre dubbatu jiraattoonni naannichaa.
Jiraataan magaalaa jigjigaa tokko bilbilaan BBC'tti akka himaniitti, ''Ammaan tana Jigjigaan jiran. Magaalaa gutuun saamamee jira. Suuqiin hotelli wanti hunti hinsaamamiin hinjiru. Kanaafuu ummanni beelaaf saaxilameera,'' jedhaniiru.
'Abdii Mohaammad Umar aangoo gadhiisuuf irra deddeebiin gaafachaa turan'
Mootummaanis gara qee'ee keessaniitti deebii'aa jechuun alatti wanti taasisee akka hinjirre dubbataniiru.
Jiraattuun magaaladhuma Jigjigaa kan taate kan bira ammoo, halli kaleessa ture gaman nageenyaatiin gaari ta'u himtee, polisiifi raayyaanis hojii tasgabbeessu hojjataa jiraa jettee jirti.
Namni hedduun akka gara qee'ee isaaniitti hindacha'iiniifi hedduunis beela'aa akka jiru jiraattuun tunis himte jirti.
Haa ta'u malee sun yoo dhume, akkam akka taanu hinbeeknu. Fakkenyaaf bishaan ujjummeen sommaa'ee waan jedhaniif namni dhugaa hinjirus jette jirti.
Karaa gama biraatiinis Ministrri fayyaa Itoophiyaa garee oggeessotaa gara sanatti eergu himeera. Garichis namoota walitti bu'iinsaan miidhaman 53 adda baasuufi kanneen keessaa 30 kan ta'an kan waldhaansa baqaqsanii hodhu barbaadaniidha jedhaniiru.
Pirezidantiin naannoo Somaalee haarawaa Ahimad Abdii Mohaammad maal jedhu?
Namni xiyyaara balali'uuf jedhu gubbaa argame to'annoo jala oole